I-Trillium Acres Guest House - I-Airbnb
I-Trillium Acres Guest House
344 okushiwo abanye
Morgantown, West Virginia, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Rebecca
I-wifi esheshayo engu-487 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela endaweni ehlanganyelwayo.
U-Rebecca Ungumbungazi ovelele
Itholakala kumamayela ayi-10 ukusuka edolobheni laseMorgantown kanye nenkundla yezemidlalo. I-Cooper's Rock iqhele ngamamayela angu-12, ngokuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili lezintaba nokuqwala amatshe. Indlu yethu ethokomele enezinsiza zesimanje ingahlalisa abantu abayisi-6 abanemibhede yezindlovukazi emi-2, iwele elingu-1 kanye nosofa wendlovukazi wokudonsa.
I-Trillium Acres Cottage ingumnyango olandelayo kanye nokuhamba ngezinyawo okufushane ehlathini lamaqembu amakhulu adinga indawo eyengeziwe.
Indlu yethu yezivakashi ethokomele inendawo yokuhlala ekhangayo, enegumbi lokuhlala lesitayela se-studio, ikhishi kanye nesitofu sezinkuni esingazithokozela kusihlwa ezibandayo. Amafasitela amaningi kanye nomnyango wengilazi eshelelayo ukumema ukuthi uphumele ngaphandle futhi ujabulele indawo ebanzi nokubukwa okuhle kokushona kwelanga.
Izitebhisi ezivulekile ziholela egumbini lokulala lesithathu, elifakwe umbhede weNdlovukazi nombhede wamawele. Ukugeza okuyingxenye kufakwe ekhoneni lekamelo.
Phuma ngaphandle naphansi ukuze ufinyelele i-suite yezinga eliphansi (elingenakufinyeleleka ngaphakathi kwendlu). Igumbi lokulala elihluke ngokuphelele nelizimele elinombhede wendlovukazi kanye nokugeza kwangasese. Nethezeka ngemva kosuku olude kubhavu wosayizi ovulekile we-jacuzzi.
Ngaphandle, ngemuva kwendlu kukhona obhavu ababili be-clawfoot ababekwe endaweni eyisitezi. Amanzi ashisayo adingeka kakhulu azowagcwalisa ngamanzi ashisayo ukuze anciphise ukukhathazeka kwakho. (Ingase ingatholakali ngesikhathi sezulu esibandayo sasebusika) Hlola incwadi yokwamukela ngaphakathi endlini ukuze uthole imiyalelo.
Indlu enkulu, ababungazi abahlala kuyo, itholakala eduze nje kwendlu yezivakashi futhi umgwaqo wokungena wabelwe phakathi kwezindlu zombili.
Izilwane ezifuywayo zamukelekile! Siyacela ukuthi izinja ziboshelwe izintambo uma ngaphandle kwendlu, kunezinkukhu zamahhala endaweni kanye namakati (amakati ayaboshwa uma engaphandle) Ngemuva kwendlu kunendawo ebiyelwe uma ungathanda ukuvumela izinja zakho zibaleke intambo. Siyajabula uma usazisa ukuthi izilwane ezifuywayo ziza nawe.
I-wifi esheshayo – 487 Mbps
4.96 out of 5 stars from 344 reviews
4.96 · 344 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-344
Nakuba sinomakhelwane eduze, bonke abasabonwa, ngenxa yamagquma nezihlahla. Ngaphesheya komgwaqo kune-Snake Hill Wilderness Management Area, enemizila yezintaba kanye nokuqwala amatshe uma unemishini yakho. Futhi kuhle kakhulu ukushushuluza eqhweni ebusika.
Sitholakala cishe imizuzu eyi-15 ukusuka e-Cooper's Rock, kanye nemizuzu engama-25 ukusuka eSitediyamu (kuya ngethrafikhi)
Indlu iyazingena ngekhodi yomnyango. Ngiyajabula ukwazi isikhathi sakho sokufika esicishe sibe khona ukuze ngikwazi ukutholakala ngocingo uma unemibuzo noma izinkinga lapho ufika. Ngicela ungangabazi ukungazisa uma kukhona okudingayo noma okungahambi kahle ukuze ngenze konke okusemandleni ami ukukulungisa.
Indlu iyazingena ngekhodi yomnyango. Ngiyajabula ukwazi isikhathi sakho sokufika esicishe sibe khona ukuze ngikwazi ukutholakala ngocingo uma unemibuzo noma izinkinga lapho ufika.…
URebecca Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Morgantown namaphethelo